5 Arrimood Oo Dumarka U keenta In Timuhu Ka Daataan - iftineducation.com
iftineducation.com – Maxaad ka taqaannaa 5-ta dhaqan xumo ee dumarka u keenaysa in ay tintu ka go’do ama ka guranto?
Tima go’ go’a ayaa ah mid ka mid ah dhibaatooyinka ay ka cawdaan haweenku.
Dhaqamadaan xun e tinta jaraya ayaa waxaa sabab u ah isla haweenka nafsadoda, laakin laga yaabee in aanay ogayn oo aanay ku baraarugsanayn arrintaas.
5-ta arrin ee dumarka u keenta in timuhu ka daataan oo ay noqdaan tin la’aanta ayaa kala ah:
Tinta oo lagasoo shaleeyo hoos ama jiridda: Habka ugu wanaagsan ee timaha loo shalleeyo ayaa ah in dhinacyada looga billaabo madaxa shanlada kadib madaxa qaybtisa sare la gaarsiiyo ilaa ugu dambaynta jiridda tinta ama meesha ay kasoo baxdo la gaarsiiyo sanlada, sidoo kale waxaa lagula talinaa haweenku shanlada ay isticmaalayaan in ay noqoto mid wayn inta badan oo shallooyinka ilkaha yaryar aanay u badnaan.
Tinta oo la dhaqo maalin kasta: Tinta oo maalin kasta la dhaqaa waxa ay kamid tahay dhaqannada ay haweenku sameeyaan misna dhib ku ah tinta, waayo waxa ay jilcinaysaa tinta kadibna way guraysaa. Sidaa darteed waxaa wanaagsan in isbuucii hal mar ama ugu badnaan labo mar ay haweenaydu tinta dhaqato.
Foonaynta tinta: In badan oo ka mid ah haweenka ayaa isla marka ay madaxa ama tinta soo dhaqdaan horay ugala carara fooneeyaha si ay ugu qallajiyaan, taasina waxa ay keenaysaa in tintu difaaca ka dhimato oo ay guranto, waxaa haweenka laguna talinayaa in qallajinta tinta u daayaan hawada, haddiisa ay lagama maarmaan tahay waa in fooneeyahay ay dabka ka yareeyaa, isla markaana aysan maalin kasta isticmaalin.
Tinta oo kuleeyl badan uu ku dhaco: Kulaylka faraha badan eek u dhacaya tinta haweenka waxa uu ka mid yahay waxyaabaha keenaya dhamaanshiyaha tibta iyo in ay guranto.
Nafaqo la’aan: Tintu waa noole way kortaa, waxaa saamayn ku yeesha waxyaabaha ka baxsan sida kulaylka iyo hawada, sidoo kale waxaa saamayn ku yeesha waxyaabaha gudaha ah sida nafaqa xumada.
F.G: Nafaqa xumada lagama wado cuntada uu qofku cunayo, laakin waa madaxa in saliid iyo kareem la mariyaa.
Haddaba adigu haddaad tahay qof haweenay ah 5-taan qodob sided u aragtaa?
Midkeese adigu samaysaa?
Kaddib markaad aqrisay faalladaan, ma qorshaynaysaa inaad joojisid, oo tintaada aad badbaadisid?
Deg deg: Angelina Jolie Oo Shil Xun Gashay